Xogta Weerarkii Alshabaab ku qaaday Wisil - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Xogta Weerarkii Alshabaab ku qaaday Wisil
Xogta Weerarkii Alshabaab ku qaaday Wisil
June 27, 2021 admin601
Faafaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxayaa weerar ay ururka Alshabaab saaka aroortii ku qaadeen magaalada Wisil oo 60 km u jirta degmada Hobyo gobolka Mudug.
Weerarka ayaa ku bilowday qarax ismiidaamin ah oo ay Alshabaabku la beegsadeen Albaabka xerada ciidamada Daraawiishta Galmudug ku lahaayeen halkaas, waxaana kadib shabaabku dagaal la galeen ciidankii ku sugnaa xerada, sidoo kale waxa ay tiro hoobiyayaal ah ku tuureen xaafadaha Magaalada Wisil.
Kooxda weerarka geysatay ayaa dib uga baxay goobihii lagu dagaalamay, waxaana la sheegaya in khasaaraha dhimashada dhinaca Shacabka iyo Daraawiishta ay gaarayso in ka badan 30 ruux, halka dhaawacu uu intaas ka badan.
Dhanka kale Alshabaab ayaa miinooyin ku aasay waddooyinka soo gala magaalada Wisil, waxaana saaka wadada u dhaxaysa Wisil iyo Gawaan miino kula qaraxday Gaari yar oo ah nuuca Kabta-Buudka (Mitsubishi) waxaana ku geeriyooday 4 qof.
Ciidamo gurmad ah ayaa gaaray Wisil, Dhaawacyada dadka deegaanka iyo ciidamada Galmudug ayaa galabta iyo caawa diyaarado ka dajiyeen Magaalada Muqdisho, halka qaar kale lagu dabiibayo isbitaalada Gaalkacyo.
Dhanka Alshabaab ayey adag tahay in xog laga helo khasaaraha kasoo gaaray dagaalka, xogo horudhac ah ayaa sheegayaa in ay dhaawacyada Alshabaab la geeyey magaalada Jowle oo hoostagta degmada Xarardheere.
Weerarka Alshabaab ee Wisil ayaa muujinaya khatarta Alshabaab deegaanada Galmudug, waxaana magaalada muhiim u tahay isku socodka Hobyo iyo Gaalkacyo, Madaxda Galmudug ayaan wali ka hadlin mashaqada ka dhacday Wisil.
JOB ADVERT-PROJECT ENGINEER
Ciidamo Ajnabi ah oo gaaray Duleedka Hobyo.
Daawo: Booliska Cadaado oo soo badbaadiyey Cunug yar oo Qashin lagu dhextuuray
Galmudug iyo Ahlu sunna oo heshiis gaaray (Sawirro)